Natiijadu waa daahdaa – JOORNAAL
Natiijadu waa daahdaa
January 3, 2021 January 3, 2021 ~ joornaal
By Cali Cusmaan ccusmaan@gmail.com
Bal ka waran haddii dayuurad Boeing 747 ah ay badasho jihadeeda 2 degree? Marka hore wax weyn oo isbadal ah kuu muuqan maayaan laakiin saacado ka dib dayuuradaas waxay u jirsan meeshay u socotay wax ka badan kun kiiloomitir! Dadka intooda badan waxaa ay dhayalsadaan waxa ay caadeystaan maxaa yeelay saameyntooda waa soo daahdaa oo isla markaa ma arkayaan sida dayuuradaas oo kale.
Waxaa laga yaabaa in aad caadeysato in aad ku mashquusho Facebook, TikTok iyo Whatsapp oo aad iska deyso in aad maskaxdaada, jirkaaga iyo xiriirka aad la sameyneyso dadka wanaagsan aad hilmaanto. Sanadaha hore wax weyn iska kaa badeli maayaan. Laakiin sanadka 4aad ama sanadka 5aad waxaad is arki doontaa adiga oo aan waxba aqoon, jirkaagii uu daqoobay, oo maskaxdaada wax cilmi ah ku jirin. Waxaad kaloo arki adigoo dadka magaaladaada xaga ganacsiga, waxbarashada iyo dhamaan qiimaha ku leh aan wax xiriir la taaban karo idinka dhaxeyn waayo waxaad ku mashquulsantahay xiriir kale oo dhalanteed ah. Waxaad is arkeysaa oo kale adigoo salaadihii aan masjidka ku tukan, muxaadaro aan dhageysan kareyn ama buug qiimo leh aan aqrin kareyn ileen waxay u baahanyihiin waqti dheer in aad siiso, laakiin maskaxdaada waxaad bartay wax gaaban oo xiiso leh waqtigan laakiin aan qiimo lahayn xaga nolosha.
Waxaas oo raad xun ah maxaa kugu reebay? Waxaa kugu reebay caado aad caadeysatay in aad yara fiir fiiriso Facebook, Tiktok iyo Whatsapp oo aad iska hilmaanto wixii muhiim ka ahaa ee naftaada, diintaada iyo dalkaaga anfici lahaa kuna mashquulay caadooyin xun laakiin doqoni ma garato ah oo iska goos goos laakiin si sibiq ah waqti badan oo muhiim ah kaaga lumiyey.
Bal ka waran haddii aad maalin walba caadeysato in aad intaadan shaqada bilaabin aad tiraahdo 100 jeer Subaxaanalaaahi wa bi xamdihi? Sodon cisho kadib Allah waxaad xustay in gaareysa 3000 jeer. Sanadkii waxaad Allah xustay 36000 kun oo jeer. Waxa Allah ajar kuu qoray lama qiyaasi karaayo, laakiin waa caado marka hore kula yar laakiin haddii aad la qabsato noqoneysa wax weyn.
Geedka loo yaqaan Bamboo (Baambuu) ga haddii aad mirihiisa beertid sadexda ilaa shanta sano ee hore wax soo baxay oo geed ah arki meysid waayo wuxuu sameysan jirdo dhulka hoostiisa ah. Markaa ayuu soo bixi maalin oo shan usbuuc gudahooda wuxuu ku gaarayaa 25 mitir oo dhirir ah. Haddii aad wax dhaqso ah sugeysey waxaad u maleyneysaa in aad miro halaabay ama baaray beertay, laakiin xaqiiqda waxaa weeye, salkii iyo aaskii uu ku bixi lahaa ayaa diyaar noqonayey oo haddii aysan sabar lahayn beeraleyda bamboo ga beertaa waxba ma beerteen. Waxaa sidaas la mid ah wax barashada iyo ganacsiga. Marka hore wax badan ayaad ku daaleysaa in aad jirdaha ama aas aaska u taagto laakiin markii aad aas aaskaas dhisto wax walba dhaqso ayay aas aaskaas ugu koraayaan.
Bal waxaad tijaabisaa oo qortaa mudo laba usbuuc ah waxa aad waqtigaaga geliso markaad soo kacdo ilaa aad ka seexaneyso! Maxaa kuu soo baxay? Waa maxay waxa aad caadeysatay ama waqtigaaga ku bixiso?
‹ PreviousSidee ku badali kartaa waxii aad caadeysatey
Next ›Kaligaa Ma tihid